Bit By Bit - Fametraham-panontaniana - 3.6.1 Malagasy manontany
Mampifandray ny fanadihadiana ny nomerika soritra afaka ny ho tahaka ny mametraka ny fanontaniana ny olona rehetra amin'ny fotoana rehetra.
Ny fametrahana amin'ny ankapobeny avy amin'ny sokajy roa lehibe: santionan'ny fanadihadiana sy ny fanisam-bahoaka. Sample fanadihadiana, izay mahazo ny vitsy ny olona, ​​dia mety ho malefaka, ara-potoana, ary somary mora vidy. Na izany aza, santionan'ny fanadihadiana, satria mifototra amin'ny santionany, matetika no voafetra ny fanapahan-kevitra; amin'ny santionany fanadihadiana, dia matetika no sarotra ny manao vinavina momba ny faritra jeografika manokana na ho an'ny vondrona manokana isan'ny mponina. Fanisam-bahoaka, eo amin'ny hafa, miezaka mba hanadihady ny olona rehetra ao amin'ny mponina. Manana vahaolana lehibe, fa amin'ny ankapobeny lafo, tery amin'ny mifantoka (izy ihany no ahitana ny vitsy ny fanontaniana), fa tsy ara-potoana (dia mitranga amin'ny fandaharam-potoana raikitra, toy ny isaky ny 10 taona) (Kish 1979) . Ary sary an-tsaina raha toa ka afaka hanambatra ny mpikaroka toetra tsara indrindra ny santionan'ny fanadihadiana sy ny fanisam-bahoaka; sary an-tsaina raha toa ka afaka mangataka mpikaroka fanontaniana rehetra amin'ny olona rehetra isan'andro.
Mazava, izany mandrakariva, ubiquitous, foana-on fanadihadiana dia karazana siansa ara-tsosialy Fantasy. Kanefa, dia hita fa afaka manomboka manakaiky fanakambanana izany amin'ny alalan'ny fanadihadiana fanontaniana avy amin'ny vitsy ny olona amin'ny nomerika soritra avy amin'ny olona maro. Dia miantso izany karazana mitambatra mihamafy amin'ny nanontany. Raha nanao tsara, dia mety hanampy antsika manome tombana izay kokoa ny eo an-toerana (fa kely kokoa faritra ara-jeografia), granular bebe kokoa (ho an'ny vondrona manokana isan'ny mponina), ary ara-potoana kokoa.
Ohatra iray ny naparitaka nanontany hoe avy amin'ny asan'ny Josoa Blumenstock, izay te hanangona tahirin-kevitra izay hanampy hitarika fampandrosoana any amin'ny tany mahantra. More manokana, Blumenstock te hamorona rafitra mba handrefesana harena, ary tsara-panahy izay mitambatra ho feno ny isa miaraka amin'ny manovaova sy matetika ny fanadihadiana (Blumenstock 2014; Blumenstock, Cadamuro, and On 2015) . Raha ny marina, dia efa efa namaritra ny asa Blumenstock vetivety tao amin'ny Toko 1.
Mba manomboka, Blumenstock niasa tamin'ny finday ny lehibe indrindra mpanome any Rwanda. Ny orinasa nanome azy manafina anarana raharaham-barotra firaketana an-tsoratra avy amin'ny tokony ho 1,5 tapitrisa mpanjifa fandrakofana fitondran-tena tamin'ny 2005 sy 2009. Ny hazo misy fanazavana momba ny antso sy ny lahatsoratra tsirairay hafatra toy ny fanombohan'ny fotoana, ny faharetany, ary tokotokony-toerana ny mpiantso sy ny mpandray. Alohan'ny manomboka miresaka momba ny antontan'isa olana, tsy hanenenana manondro fa ity dingana voalohany dia mety ho iray amin'ireo mafy indrindra. Araka ny voalaza tao amin'ny Toko faha 2, Hafanàm-po an soritry ny ankamaroan'ny antontan-kevitra dia tsy azo nidirana ny mpikaroka. Ary, orinasa maro no Rariny misalasala mba hizara ny tahirin-kevitra satria tsy miankina; fa ny mpanjifa no mety tsy manantena fa ny rakitsoratra ho zaraina-in ampahany-amin'ny mpikaroka. Amin'ity tranga ity, ny mpikaroka nandray tsara dingana mba anonymize ny angon-drakitra sy ny rafiny dia overseen iray fahatelo-antoko (izany hoe, ny IRB). Nefa, na dia teo aza ireo ezaka ireo, ireo antontan-kevitra ireo angamba mbola fantatra ary azo inoana fa misy vaovao saro-pady (Mayer, Mutchler, and Mitchell 2016; Landau 2016) . Aho hiverina ho etika ireo fanontaniana ao amin'ny Toko 6.
Tadidio fa i Blumenstock liana amin'ny fandrefesana harena, ary tsara-panahy. Nefa, ireo toetra dia tsy mivantana ao amin'ny firaketana an-tsoratra ny antso. Amin'ny teny hafa, ireo firaketana an-tsoratra dia tsy feno antso ho an'ny fikarohana io, dia endri-javatra mahazatra ny nomerika soritra izay noresahina amin'ny an-tsipiriany tao amin'ny Toko faha 2 Fa, dia toa azo inoana fa ilay antso rakitsoratra mety manana vaovao momba harena sy tsara-panahy. Noho izany, fomba iray Blumenstock manontany ny fanontaniana mety ho: no azo atao ny maminany ny fomba olona dia mamaly ny fanadihadiana mifototra amin'ny nomerika ny tahirin-kevitra soritry? Raha izany no izy, dia amin'ny alalan'ny fametrahana olona vitsivitsy isika, dia afaka maminavina ny valiny ny olon-drehetra.
Mba hijery izany empirically, Blumenstock sy ny fikarohana mpanampy avy any Kigali Institute ny Siansa sy ny Teknolojia hoe ny santionany ny momba ny arivo mpanjifa finday. Ny mpikaroka dia nanazava ny tanjon'ny tetikasa ho an'ny mpandray anjara, nangataka ny fanekena ny mampifandray ny fanadihadiana valinteny ny antso firaketana an-tsoratra, ary avy eo dia nanontany azy ireo andiam-panontaniana mba handrefesana ny harena, ary tsara-panahy, toy ny hoe "Moa ve ianao manana onjam-peo? ", ary" Moa ve ianao manana bisikileta? "(jereo ny sary 3.11 fa ny ampahany lisitra). Mpandray anjara rehetra ao amin'ny fanadihadiana no tambiny ara-bola.
Manaraka, Blumenstock nampiasa roa-dingana fomba mahazatra ao amin'ny tahirin-kevitra momba ny siansa: endri-javatra ho injeniera nanaraka ny nanara-maso ny fianarana. Voalohany, eo amin'ny endri-javatra injeniera dingana, ho an'ny olona rehetra izay nanadihady, Blumenstock niova fo ny antso firaketana an-tsoratra ho andian-toetra ny olona tsirairay; angon-drakitra mpahay siansa mety hiantso ireo toetra "endri-javatra" sy ny ara-tsosialy ny mpahay siansa dia miantso azy ireo hoe "hiovaova." Ohatra, ho an'ny olona tsirairay, Blumenstock kajy isan'ny andro amin'ny asa, ny isan'ny miavaka olona ny olona iray dia efa nifandray, ny vola ny vola lany amin'ny airtime, sy ny sisa. Manakiana, endri-javatra tsara injeniera dia mitaky fahalalana ny fikarohana sehatra. , Ohatra, raha zava-dehibe ny manavaka an-toerana sy ny iraisam-pirenena antso (mety manantena ny olona izay miantso iraisam-pirenena mba ho manankarena), dia tsy maintsy atao io amin'ny endri-javatra dingana injeniera. Ny mpikaroka amin'ny fahatakarana Rwanda kely mety tsy ahitana io endri-javatra io, ary avy eo ny vinavina fanatanterahana ny modely dia hijaly.
Manaraka, ao amin'ny nanara-maso dingana fianarana, Blumenstock nanao ny antontan'isa modely ho mialoha ny valin'ny fanadihadiana ho an'ny olona tsirairay mifototra amin'ny ny endri-javatra. Amin'ity tranga ity, Blumenstock pitaovana nampiasa ny fihemoran'ny tamin'ny 10 heny cross-fankatoavana, fa afaka nampiasa ny antontanisa hafa isan-karazany na milina fomba fianarana.
Koa ahoana izy io no asa tsara? I Blumenstock afaka mialoha ny valin'ny fanadihadiana fanontaniana tahaka ny hoe "Moa ve ianao manana onjam-peo?", Ary "ve ianao manana bisikileta?" Mampiasa endri-javatra antso ampy amin'ny firaketana an-tsoratra? Karazana. Ny marina ny faminaniana dia avo ho an'ny sasany toetra (Sary 3.11). Saingy, dia zava-dehibe foana ny mampitaha ny fomba sarotra faminaniana manohitra tsotra hafa. Amin'ity tranga ity, tsotra hafa dia ny maminavina fa ny olona rehetra dia hanome ny valiny mahazatra indrindra. Ohatra, 97,3% nilaza hividy ny fampielezam-peo toy izany raha Blumenstock efa nilaza mialoha fa ny olona rehetra dia tatitra hividy ny onjam-peo dia ho nahita ny marina ny 97,3%, izay mahagaga mitovy amin'ny ny fampisehoana ny fomba sarotra kokoa (97.6% marina). Amin'ny teny hafa, ny raitra sy ny angon-drakitra modeling nampitombo ny marina ny faminaniana avy amin'ny 97,3% amin'ny 97,6%. Na dia izany aza, fa ny fanontaniana hafa, toy ny hoe "Moa ve ianao manana bisikileta?", Ny filazana mialoha avy amin'ny 54,4% nihatsara ny 67,6%. More ankapobeny, Figure 3,12 lafin-toetra sasany dia mampiseho fa tsy hanatsara Blumenstock be mihoatra noho ny fanaovana ny kely saina fotsiny fototra faminaniana, fa ho an'ny hafa toetra nisy fanatsarana ny sasany.
Sary 3.11: vinavina araka ny marina ho an'ny antontan'isa modely voaofana amin'ny antso rakitsoratra. Vokatra avy amin'ny Loha Hevitra 2 ny Blumenstock (2014) .
Sary 3,12: Fampitahana ny vinavina ho an'ny antontan'isa marina modely voaofana amin'ny antso rakitsoratra ho tsotra fototra faminaniana. Points dia kely jittered mba tsy hifanindry; jereo Loha Hevitra 2 ny Blumenstock (2014) ho an'ny soatoavina marina.
Tamin'izay fotoana izay dia mety ho mieritreritra fa ireo vokatra ireo dia somary nandiso fanantenana, fa herintaona monja tatỳ aoriana, Blumenstock sy roa mpiara-miasa-Gabriel Cadamuro sy Robert On-namoaka taratasy tao Science amin'ny betsaka kokoa vokatra (Blumenstock, Cadamuro, and On 2015) . Nisy roa lehibe ara-teknika antony ny fanatsarana: 1) dia nampiasaina kokoa ny be pitsiny fomba (izany hoe, vaovao fomba mba manasongadina injeniera sy kokoa be pitsiny milina fianarana modely) sy 2) fa tsy miezaka infer valin-ny tsirairay fanadihadiana fanontaniana (ohatra, "Moa ve ianao manana onjam-peo?"), dia niezaka infer ny harena mitambatra fanondroana.
Blumenstock sy ny mpiara-miasa Nampiseho ny fanatanterahana ny fomba tamin'ny fomba roa. Voalohany, dia nahita fa ho an'ny olona ao ny santionany, dia afaka manao ny tsara tarehy asa tsara ny mialoha ny harena avy amin'ny antso firaketana an-tsoratra (Sary 3.14). Faharoa, zava-dehibe kokoa mandrakizay, Blumenstock sy ny mpiara-miasa nampiseho fa ny fomba afaka hamokatra avo-tsara vinavina ny toerana fizarana ny harena any Rwanda. More manokana, dia nampiasa ny milina fianarana modely, izay niofana eo amin'ny santionany ny tokony ho 1000 ny olona, ​​mba mialoha ny harena rehetra 1,5 tapitrisa ao amin'ny antso firaketana an-tsoratra. Ankoatra izany, miaraka amin'ny angon-drakitra geospatial nandinika lalina ny antso tahirin-kevitra (mahatsiaro fa ny antso tahirin-kevitra ahitana ny toerana misy ny akaiky indrindra ho an'ny tsirairay sela tilikambo antso), ny mpikaroka dia afaka Tombanan'ny ny tokotokony toeram-ponenana ny olona tsirairay. Mametraka ireo vinavina roa miaraka, ny fikarohana vokatra Mpandanja ny amin'ny toerana fizarana ny famandrihana amin'ny tena harena tsara maka sary granularity. , Ohatra, dia afaka Tombanan'ny ny harena eo ho eo amin'ny tsirairay ny 2148 Rwanda sela (ny kely indrindra vondrona fitantanan-draharaha ao amin'ny firenena). Ireo soatoavina ireo harena mialoha toy izany izy ireo granular sarotra ny hanamarina. Noho izany, ny mpikaroka aggregated ny vokatra mba hamokatra vinavina ny eo ho eo ny harena ny Rwanda ny 30 distrika. Ireo distrika-dia mafy ny vinavinan'ny ambaratonga mifandray amin'ny tombatombana avy amin'ny volamena fitsipika nentim-paharazana fanadihadiana, Roande mponina ankapobeny sy ny Health Survey (Sary 3.14). Na ny tombatombana avy amin'ny loharanom-baovao roa dia toy izany koa, ny vinavinan'ny avy any Blumenstock sy ny mpiara-miasa dia tokony ho in-50 mora sy 10 heny haingana kokoa (raha vidin'ny in refesina eo amin'ny lafiny miova vola). Izany miavaka fihenan'ny vola dia midika fa ho mihazakazaka fa tsy isaky ny taona vitsivitsy, araka izay fitsipika ho an'ny mponina ankapobeny sy ny fahasalamana fanadihadiana-ny mifangaro ny fanadihadiana kely miaraka amin'ny angon-drakitra soritry nomerika lehibe azo mihazakazaka isam-bolana.
Sary 3,13: Schematic ny Blumenstock, Cadamuro, and On (2015) . Antsoy angona avy amin'ny orinasa telefaonina dia niova fo ho lasitra iray-toerana ho an'ny olona tsirairay sy ny andry iray isaky ny endri-javatra io (izany hoe, miovaova). Manaraka, ny mpikaroka nanao ny nanara-maso modely fianarana mba mialoha ny fanadihadiana valinteny avy amin'ny olona amin'ny alalan'ny endri-javatra matrix. Avy eo, ny nanara-maso modely fianarana nampiasaina mba hanome tsiny ny fanadihadiana valiny ho an'ny rehetra. Raha ny marina, ny mpikaroka nampiasa ny valinteny ny tokony ho arivo ny olona mba hanome tsiny ny harena ny tokony ho iray tapitrisa. Koa, ny mpikaroka tokotokony tombanana ny toeram-ponenana ho an'ny rehetra ny olona 1,5 tapitrisa miorina amin'ny toerana ny antso. Rehefa vinavina roa ireo dia mitambatra-ny Tombanana harena sy ny toerana tombanana-ponenana-ny vokatra dia toy izany koa ny vinavina avy amin'ny mponina ankapobeny sy ny Fahasalamana Survey, ny volamena-fitsipika nentin-drazana fanadihadiana (Sary 3.14).
Sary 3.14: Vokatra avy amin'ny Blumenstock, Cadamuro, and On (2015) . Any amin'ny olona lenta, ny mpikaroka dia afaka manao ny asa antonony amin'ny olona mialoha ny harena avy amin'ny firaketana an-tsoratra ny antso. Ny vinavina ny distrika-anivon'ny harena, izay mifototra amin'ny ambaratonga tsirairay-vinavina ny harena sy ny toeram-ponenana, ny valiny dia mitovy amin'ny vokatra avy amin'ny mponina ankapobeny sy ny Fahasalamana Survey, ny volamena-fenitra fanadihadiana nentim-paharazana.
Ho famaranana, ny Malagasy Blumenstock mangataka mitambatra fomba nomerika Ny valin'ny fandinihana natao amin'ny soritry angon-drakitra mba hamokarana vinavina mitovy amin'ny volamena-fenitra vinavinan'ny fanadihadiana. Ity ohatra manokana ihany koa ny manazava ny sasany ny varotra-offs eo naparitaka manontany sy ny nentim-paharazana fomba fanadihadiana. Voalohany, ny naparitaka mangataka vinavina dia ara-potoana kokoa, betsaka mora kokoa, sy ny maro hafa granular. Fa, amin'ny lafiny iray hafa, amin'izao andro izao, tsy misy mafy noho izany teorika fototra karazana naparitaka manontany. Izany hoe, ity iray ity ohatra dia tsy mampiseho rehefa asa ary rehefa izany dia tsy. Ankoatra izany, ilay naparitaka nanontany hoe fomba tsy mbola manana fomba tsara ho refesina tsy fahazoana antoka manodidina ny vinavina. Na izany aza, naparitaka nanontany hoe manana fifandraisana lalina amin'ny faritra telo lehibe ao amin'ny antontan'isa-modely-monina lahatsoratra-stratification (Little 1993) , imputation (Rubin 2004) , ary ny kely-faritra tombany (Rao and Molina 2015) -ary noho izany dia manantena fa ny fandrosoana no ho haingana.
Malagasy nanontany hoe manaraka fomba fandrahoan-tsakafo fototra izay azo mifanaraka amin'ny toe-javatra manokana. Misy sakafo roa sy dingana roa. Ny roa sakafo dia 1) ny nomerika soritry dataset izay malalaka fa manify (izany hoe, manana olona maro, fa tsy ny fanazavana ilainao momba ny tsirairay olona) ary 2) ny fanadihadiana izay tery, fa matevina (izany hoe, manana vitsy ihany ny olona, ​​fa manana ny fampahalalana izay ilainao momba ireo olona). Avy eo, misy dingana roa. Voalohany, satria ny olona roa angon-drakitra loharanom-baovao, hanorina milina modely fianarana izay mampiasa tahirin-kevitra nomerika soritry ny fanadihadiana mialoha valiny. Manaraka, mampiasa ny milina modely fianarana mba hanome tsiny ny fanadihadiana valiny ny olona rehetra ao amin'ny nomerika soritry angona. Noho izany, raha toa ka misy fanontaniana sasany izay te-hangataka ny maro ny olona, ​​mitady nomerika soritry angona avy ireo olona izay mety ho ampiasaina mba mialoha ny valiny.
Fampitahana Blumenstock ny voalohany sy faharoa andrana ny olana ihany koa ny mampiseho manan-danja lesona mikasika ny tetezamita avy amin'ny vanim-potoana faharoa amin'ny vanim-potoana fahatelo fomba ny fanadihadiana fikarohana: ny voalohany dia tsy ny farany. Izany hoe, matetika, ny fomba voalohany, dia tsy ho ny tsara indrindra, fa raha mitohy mpikaroka miasa, ny zavatra afaka mahazo tsara kokoa. More ankapobeny, rehefa fanombanana vaovao fomba ny fiaraha-monina fikarohana ao amin'ny nomerika taona, dia zava-dehibe ny ho roa miavaka tsara evaluations: 1) Ahoana no tsara manao ity asa ity amin'izao fotoana izao ary 2) ny fomba tsara ve ny hevitrao izany mety miasa amin'ny ho avy ho toy ny antontan-kevitra tontolo fanovana sy toy ny mpikaroka ny saina bebe kokoa ny olana. Na, ny mpikaroka no nampiofanina hanao ny karazana tombana voalohany (tsara izany sombin-fikarohana manokana), ny faharoa dia matetika no zava-dehibe kokoa.